Julius K9 harness, fa maninona no fofona alika tsara indrindra? Hevitra sy tolotra | Tontolo alika
Araka ny fantatrao tsara, raha misy kojakoja ilaina amin'ny alika ireto dia harnesses. Satria sombin-javatra ilaina izay manome fampiononana ho antsika fa koa ho an'ny felines. Tokony hampifangarointsika izany rehefa mampianatra na manabe azy ireo. Noho izany dia mila manana safidy toa ny fiadiana ny bongo Julius K9 isika.
Tsy isalasalana fa izany Julius K9 harness dia be mpitia amin'ny zavatra rehetra mety ho hitantsika. Raha mbola tsy fantatrao ny antony, anio dia hanana fisalasalana ianao. Ny valiny lehibe dia nahatonga azy io ho mpivarotra tsara indrindra ary noho izany antony izany dia mila manana izany koa ianao amin'ny fiainanao. Jereo!
1 Ny fifanarahana androany momba ny fiasa Julius K9
2 Fa maninona no ny Julius K9 no manararaotra ny iray amin'ireo tsara indrindra?
3 Ahoana ny fomba hisafidianana ny haben'ny kofehy Julius K9
4 Julius K9 fitaovam-piadiana
5 Ahoana ny fomba fiakanjo ny jiro Julius K9
6 Azonao atao ve ny manamboatra ny bokotra Julius K9?
7 Mendrika ve ny hividy ny fiasan'ny Julius K9?
8 Aiza no hividianana fehiloha Julius K9 tany am-boalohany mora vidy
8.2 Fitsarana anglisy
Ny fifanarahana androany momba ny fiasa Julius K9
JULIUS-K9 IDC Fiasa ho an'ny ...
JULIUS-K9 16IDC Hery ...
JULIUS-K9 16IDC fiarovana fiarovana ...
JULIUS-K9 Harness ...
Fa maninona no ny Julius K9 no manararaotra ny iray amin'ireo tsara indrindra?
Voalohany dia tokony holazaina fa ny kofehin'ny Julius K9 dia iray amin'ireo tsara indrindra satria azonao ampiasaina amin'ny faritra samihafa. Izany hoe, amin'ny lafiny iray handeha hitsangatsangana miaraka amin'ny alikao, fa amin'ny lafiny iray hiasa sy hampiofana azy, manome foana ny valiny andrasana. Saingy ny tombony lehibe azon'izy ireo dia tsy ho tavela eo raha milaza izahay fa io no tsara indrindra. Noho izany, tsy azontsika adino fa mahatohitra izaitsizy izy io, zavatra izay tsy maintsy raisintsika rehefa mividy harness.
Tena porofo mivaingana sy manaikitra izy io, ka mety haharitra ela kokoa noho ny fieritreretanao azy. Izy io dia manana fihazonana tsara, izay midika fa azonao atao ny mampifanaraka azy hatrany amin'ny haben'ny alikanao, mora be ny mametraka azy.
Ka ankoatry ny kalitao dia mora ampiasaina. Ary koa, azonao atao ny mitafy fango mahazatra, raha tianao. Efa fantatray fa manana ny zava-drehetra ianao mba hahombiazana!
Ahoana ny fomba hisafidianana ny haben'ny kofehy Julius K9
Na dia marina aza fa azo ahitsy izy io, dia tsara foana ny misafidy ny habe mety indrindra ho an'ny bibintsika. Noho izany dia tsy safidy tsotra foana io, satria tsy maintsy mijery akaiky ny maodely tsirairay isika ary mazava ho azy, amin'ny haben'ny volom-bolontsika. Satria, tokony refesinao ny vodin-tratra, misy halavirana manodidina ny 4 eo aorin'ireo tongony eo aloha. Ity no refy fototra amin'ny safidy rehetra afa-tsy ny Baby 1 sy 2, satria ahena ho roa rantsantanana izany:
Ilay antsoina hoe harness Baby 1 Natao ho an'ny alika eo anelanelan'ny 29 sy 36 sentimetatra izy io.
Ny kofehy Baby2 dia efa tonga lafatra ho an'ny biby misy refy manomboka 34 ka hatramin'ny 45 centimetatra.
El mini-mini Izy io dia aseho ho an'ny alika eo anelanelan'ny 41 sy 43 sentimetatra.
Ilay atao hoe Solo Mini dia efa lavorary raha 49 sy 67 santimetatra ny haben'ny biby fiompinao.
Miala ao ambadiky ny mini size, izao dia hiditra ny refy 0 izay mety tsara amin'ny alika somary lehibe kokoa isika ary eo anelanelan'ny 58 sy 76 santimetatra ny refiny.
Ny habe 1 dia mifanitsy amin'ny biby eo anelanelan'ny 63 sy 85 sentimetatra.
raha mbola habe 2 dia mifanaraka tsara hatramin'ny 96 sentimetatra.
Ho an'ny alika izay mahatratra 115 santimetatra dia efa mila miresaka momba ny habe 3 isika.
Farany hitantsika ny haben'ny 4 izay natao ho an'ny alika lehibe indrindra hatramin'ny 138 sentimetatra ny habeny.
Julius K9 fitaovam-piadiana
Na dia efa nilaza aza izahay fa napetraka ho iray amin'ireo harnesses be mpividy indrindra izay miteraka toetra amam-panahy izay tsy maintsy raisinao. Betsaka izy ireo ary miovaova arakaraka ny tokony ho izy fa tsy maintsy jerentsika manokana manokana ireo tena manokana na soso-kevitra, dia ireto manaraka ireto:
Ny kofehy Julius K9 dia fitaovana matanjaka indrindra, izay haharitra mandritra ny taona maro.
Amin'ny fananana endrika ergonomika dia mahatonga azy io ho tsotra be.
Izy io dia hifanaraka amin'ny tratra sy ny kibo amin'ny fomba milamina kokoa, ka hialana amin'ny tsindry.
Manana famaranana taratra izy ireo ka na amin'ny alina aza dia tsy mahita ny alikanao ianao.
Izy io koa dia misy lavaka hitahirizana ilay zavatra ilainao ary koa tahony raha sanatria ka tazominao ilay alika amin'ny fotoana rehetra.
Izy io dia manana faran'ny rivotra ary misy sosona anatiny izay hypo-allergenic.
Ahoana ny fomba fiakanjo ny jiro Julius K9
Ny harness dia manana fanomezana tsotra be, noho izany, amin'ny inona Zava-dehibe ny mitandrina ny fanitsiana ny fehikibo na fehy, na ny tratra na ny ampahany amin'ny kibony. Satria mety hitranga fa avelantsika malalaka loatra izy ireo ary amin'ity fomba ity dia hanaisotra ny lambam-pandriana haingana ny alika. Tsy azo atao ihany koa ny manenjana be loatra satria afaka manimba ny hoditrao izahay.
Noho izany, raha marina izany dia ho fantatsika raha ny fehikibo miatrika ny kibony mamela antsika hisisika ny rantsan-tànantsika ao ambanin'ny fehin-kibo sy ao ambadiky ny biby. Na dia eo amin'ny tratra aza dia hapetraka tsara raha afaka mamindra ny rantsan-tànanao eo anelanelan'ny tongotra anoloana mankany amin'ny fehikibo. Azo antoka fa rehefa nifantina tsara ny habeny sy nampifanaraka ny fehikibo dia hahazo fiononana lehibe ho an'ny alikantsika isika.
Azonao atao ve ny manamboatra ny bokotra Julius K9?
Eny, ny bokotra Julius K9 dia azo namboarina. tAzonao atao ny misafidy logo roa, izay ho iray isaky ny lafiny harness miaraka amin'ny anarana sy loko tianao. Na dia tadidio aza fa ao amin'ny maodely Baby, dia hanana habe samy hafa tanteraka izy ireo, manitsy hatrany amin'ny fehikibo. Izany dia milaza fa mijanona ihany ny fisafidianana ny anarana, amin'ny fiheverana fa hiseho amin'ny sora-baventy ireo litera.
Anisan'ireo loko azonao atao ny misafidy dia ny elanelam-potoana tianao rehetra ary koa, homena jiro izy ireo ary ho taratra mba hahitana azy tsara. Ankoatr'izay dia manana valiny tsara izy ireo satria matetika vita amin'ny vinyl manokana.
Mendrika ve ny hividy ny fiasan'ny Julius K9?
Na dia marina aza fa tsy fitaovana mora vidy izy io, amin'ny fijerena fotsiny sy hikasihana azy io dia efa tsapantsika fa manana kalitao avo io ary iray amin'ireo antony maha-vidiana ny fiasan'ny Julius K9. Fantatsika fa miatrika famatsiam-bola isika izay hisalasala antsika mandritra ny taona maro. Tsy izany ihany, fa azontsika atao ny manamboatra azy ary ho hita ihany koa amin'ny fotoana tsy dia mahery vaika ny jiro.
Noho ireo antony rehetra ireo dia mendrika izany ary betsaka. Ho fanampin'ny habe isan-karazany ananantsika ka mahazo alalana foana ny alikanay. Saingy mila milaza aho fa rehefa manandrana izany ianao dia mahatsapa fa tonga lafatra ny fisorohana ny fisintomana ary izany dia hidika ho tsindry kely kokoa ho an'ny biby fiompintsika. Ka raha mila misafidy harness hafa indray aho dia averiko tsy misy fisalasalana.
Aiza no hividianana fehiloha Julius K9 tany am-boalohany mora vidy
Ny maha iray amin'ireo goavambe fiantsenana an-tserasera, tsapanay fa ho valiny dia ny mpivarotra Julius K9 no namidy ho mpivarotra tsara indrindra. Midika izany fa afaka manararaotra fihenam-bidy sasany ianao indraindray. Hevitra Amazon tonga lafatra izay mamela anao hahita azy amin'ny loko isan-karazany ary mazava ho azy, amin'ny habe samihafa. Azonao atao ny mamonjy ny tenanao kely pinch tsara fa mifidy foana ny vokatra araka ny itiavanao azy.
Raha misy fivarotana hafa ahafahantsika mahita kojakoja marobe, dia izany Fitsarana anglisy. Noho izany, ny biby fiompintsika dia mety ho entin'ny vokariny ihany koa satria manana hevitra maro karazana izy ireo. Ny karazan-loko sy ny famaranana rehetra dia eo amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Amin'ny maha fivarotana manokana ny biby, izay efa nitantana azy ireo nandritra ny taona maro, dia tsy azo avela amin'ny vidiny na maodely izy io raha niresaka momba ny fiasan'ny Julius K9 izahay. Averiko indray, hanana ny loko rehetra misy sy ny habeny ianao, mba tsy ho lany amin'ilay tadiavinao ianao. Etsy ankilany, ianao dia mety mahita ny fihenam-bidy hafahafa izay mora ampiasaina foana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Julius K9 Harness
Tady tsy misy tanana
Ny antiparasite tsara indrindra ho an'ny alika: spray, shampoos ary collars